Plurro na-ewetara ìgwè mmadụ ego gị na azụmaahịa mpaghara gị | Martech Zone
Enweela ụfọdụ oghere ndị dị oke egwu achọtara na ụlọ ọrụ na-ebelata ndị otu na-enwebeghị mmeri. Mkpesa sitere na azụmaahịa jiri Groupon na LivingSocial arụtụ aka n'ọtụtụ okwu:
Mbelata ego achọrọ dị egwu nke na ọ na-ewute azụmahịa.
Paymentkwụ ụgwọ na mbelata anaghị abịa ozugbo, na-akpata oke nsogbu cashflow nke binyere ụfọdụ azụmaahịa.
Ndị na-azụ ahịa ha na-adọta bụ maka naanị ihe pụrụ iche ma ghara ịlaghachi.
Ndị ụlọ ọrụ ahụ na-agbasi mbọ ike ire azụmaahịa oge niile.
Plurro agbanyela ụdị mbelata nke otu ahụ n'isi ya. Nke mbụ, ọ bụ ndị na-azụ ahịa na-akwọ ụgbọala ahụ ego mob. Ozugbo ndị enyi gị debanyere aha ka ha gaa ebe mgbakọ ma ọ bụ na-ere ahịa, Plurro kpọtụrụ azụmaahịa ahụ ụdị ego ha nwere ike ịnye. Ndị Plurro Cash Mob gosipụtara ma gosipụta tiketi ha na-agagharị ma tinye ego nnata iji nweta ego. Nke a gosipụtara site na onye nwe ụlọ ahịa ahụ.
A na-agbakwunye tiketi niile site na Plurro ma azụmahịa ahụ na-akwụ ụgwọ ego 5% na Plurro maka azụmahịa ahụ. Ọ bụ nnukwu azịza yana merie nsogbu ọ bụla dị n’elu. Nke mbu, ahia ahu nwere ike isonye ma oburu na ha choro ma dozie ego ha n’onwe ha. Na-esote, ha kwụọ ụgwọ n'ihu wee kwụọ ụgwọ Plurro. Nke kachasị mkpa, ebe ọ bụ ndị enyi ya na-eji sistemụ a… ọ bụ ihe gbasara ebe a na-ekpori ndụ ma na-ekpori ndụ dịka o siri bụrụ ego. N'ikpeazụ, naanị ihe kpatara Plurro na-akpọ bụ n'ihi na enweelarị ndị na-eche ego na-eche!
Nke a bụ nkọwa nke Plurro:
Ejikọtara Plurro na Facebook ma nye gị ohere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ị ga-esi mee atụmatụ ma kpọọ ndị enyi gị na ndị na-eme ihe ike ego.
A malitere Plurro na Northern Virginia ma na-ebupụta ugbu a na Indianapolis. Anyị ga-anwale ya - ọ bụ nnukwu ihe ngọpụ iji weghachite mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe a! Budata Plurro na gị iPhone - A gam akporo na-abịa.
Tags: ego mobotu mbelatagrouponOnyekwereplurro
Ahịa Survey Burnout